नेपालि से*नाद्वारा सत्ता हातमा लिने संकेत| ज्ञानेन्द्र शाह, केपि ओली र शेर बहादुर देउवाको नाम |अब के हुन्छ? (सहि कि गलत?) -
Home News नेपालि से*नाद्वारा सत्ता हातमा लिने संकेत| ज्ञानेन्द्र शाह, केपि ओली र शेर...
नेपालि से*नाद्वारा सत्ता हातमा लिने संकेत| ज्ञानेन्द्र शाह, केपि ओली र शेर बहादुर देउवाको नाम |अब के हुन्छ? (सहि कि गलत?)
उता कांग्रेस, नेकपा (नेपाल–दाहाल) सँगै जसपाहरूले पनि मुलुकका विभिन्न ठाउँमा भेला गरी जनता र कार्यकर्ताहरूलाई ओलीको गलत कदमबारे बुझाउन लागिपरेका छन् । साथै अदालतमा यसबारे बहस पनि चलिराखेको छ । यत्तिका समूह प्रतिगमनको विरोधमा लागेपछि लोकतन्त्र कसले मास्न सक्छ र ? तर शंका, भय, अविश्वास सर्वत्र व्याप्त छ ।
किनभने देशी–विदेशी सम्मिलित अनेक किसिमका षड्यन्त्र र सेटिङको अनुमान र अफवाहको बजार तातेको छ । नेपालका संविधानविद्हरू, नागरिक समाज, कांग्रेस, नेकपा (नेपाल–दाहाल) र जसपा एकातिर छन् भने ओली नेतृत्वको सरकार र पदका लागि सरकारमा सम्मिलितहरू दम्भका साथ अर्कातिर । तिनको दम्भको स्रोत के ? सम्माननीय ओलीको श्रोता हँसाउने खुबी मात्र ? तर उनले पनि भीड यत्रतत्र बटुलिराखेका छन् ।
उनले भीडलाई हँसाइराखेका छन् । दाहाल–नेपाललाई दुई–तीन महिनामा नागरिक समाजको स्तरमा झारिदिने धम्की दिन्छन् उनी । सुनेर उनको सरकारले भेला पारेको भीड हाँस्छ । वरिष्ठ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले एउटा भेलामा भनेजस्तै विवेकलाई बन्धक बनाएर एक व्यक्तिको हर क्रियाकलापमा समर्थन गर्ने लम्पट कार्यकर्ता भएसम्म प्रजातन्त्र फस्टाउन सक्दैन ।
Previous articleप्रह*रीले प्रचण्ड समुहका पुर्वमन्त्रीको टाउँको फु*टाइदियो, २७ राउण्ड ह’वाई फा’यर, ड’रलाग्दो झ’डप !
Next articleभर्खरै लाहुरेको श्रीम*तीलाई भगाउने यादब गयो जे*ल, राहुल र स्मिता छोरीको लागि मिलेर बस्ने lahure kanda (भिडियो हेर्नुहोस्)